လက်ဖျားရော. ခြေဖျားရော ခါသွားတယ်ဗျာ..
ကောင်းလှချည်လား... ကျေနပ်သေးဘူးဗျာ.. နောက်တစ်ခါထပ်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်.....။
ကောင်မလေး ဆုံးသွားတာတော့ ဖတ်ချင်ဘူး...............။ အတည်းနုတယ်..။ နာမည်ကလည်း တူ . နှလုံးရောဂါရှိတာလဲ တူ.. ။ စတတ်တာချင်းလဲ တူ. ဆိုတော့.. အင်း.............................။ ကျန်တာ မတူပါရစေနဲ့..။
ယုံကြည်မှု ကြောင့်ပဲ မေရော၊ မြွေရော မြေအောက်ကို ရောက်သွားခဲ့ရတယ်-တဲ့လား...၊ ဝမ်းနည်းစရာ ဇတ်လမ်းလေး ပါပဲ၊ တဖက်သားကို အလွန်အမင်း အစအနောက် သန်တာဟာ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ဖို့ပဲ ပိုများတယ်လို့ တွေးသွားခဲ့တယ်...။
အရင်က ရေးထားတာလား.. ဒါကြောင့် ဖတ်ဖူးသလိုလို လို ထင်ပြီး.. အဆုံးထိ ဆက်ဖတ်လိုက်တယ်.. ကောင်း၏..။
July 26, 2011 7:13 PM
ဖတ်ပြီး ဇာတ်ထဲမျှောသွားတယ်။ အရေးကောင်းသူ အတွေးကောင်းသူလေးရေ။..
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာအမရယ် ၊အစကနေအဆုံးထိ
တကယ်ကိုမျှောသွား ရ တယ်။
အရမ်းဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းတယ် :(
ဥပဒါန်ကြောင့် ဥပါဒ်ရောက်တဲ့ သေဘောပေါ့နော်..... ကောင်း၏.. ထပ်ရေးပါဦးမဒမ်ရဲ့.. ၀တ္တုလေးတွေ :)
စာအရေးအသားက မောင်လှမျိုးနဲ့ကို မှားလောက်တယ် လွမ်းပြီးကျန်ရမယ့် ၀တ္ထုမျိုးကို မဖန်တီးနဲ့နော် နာတို့မလွမ်းချင်တော့ဘူးကွယ်။
ကောင်းလိုက်တာဗျာ........အရေးအသားလေး.....အရမ်းမိုက်တယ်.....ပြီးသွားတဲ့အထိ မျက်နှာမလွှဲဖြစ်ဘူး.....အရမ်းကောင်းတယ် မကြီးဒိုးကန်ေ၇.....ဆားပဲ ချက်ချက် .....ဆီပဲ ချက်ချက် ....အရမ်းကြိုက်တယ်......ဂွတ်....
ဒါလေး တစ်ခါ ဖတ်ဖူးတယ် ..ခုတင်တော့ ထပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်..မမက ဘက်စုံရတယ် နော်..း)
အကြမ်းလဲ ဖြစ်တယ် အလွမ်းလဲ ဖြစ်တယ်..ဟိ
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ မေနှင့် မြွေရယ်
ဖတ်သွားတယ် ညီမ ရေ သနားစရာ